မိုးကောင်းကင်: ချစ်သူများနေ့ ပေါ်ပေါက်လာပုံ
ဖေဖော်ဝါရီ (၁၄) ရက်နေ့ နီးလာတဲ့ အခါမှာ… ချစ်သူများနေ့ ကလည်း နီးလာပြီဆိုတော့ ကျွန်တော့် ရဲ့ စာဖတ်ပရိတ်သတ်များ အတွက်
ချစ်သူများနေ့ ဖြစ်ပေါ်လာ ပုံလေး နဲ့ အချစ်ရဲ့ ဒဏ္ဍာရီ အကြောင်းလေးတွေ ကို ပြန်လည် မျှဝေ ပေးလိုက်ပါတယ်နော်…
အေဒီ (၃)ရာစု လောက်မှာ အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ ရိုမန် စစ်ဘုရင် Claudius ဟာ စစ်အင်အားတွေစုဆောင်း၊ နယ်မြေသစ်တွေတိုးချဲ့ ရင်း ပါဝါ ကြီးစိုးခဲ့တယ်..။ သူ့လက်ထက်မှာ Britain နိုင်ငံဟာ ရောမအင်ပါယာ အောက် ရောက်အောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်..။ Claudius ဟာအမြဲတမ်း နယ်ချဲ့ရင်း စစ်ပွဲကိုပဲ ဦးစားပေးဆင်နွှဲနေတော့ နိုင်ငံထဲကယောကျာ်းတွေဟာ စစ်ထဲ မဝင် ချင်တော့ ဘူး။ စစ်မတိုက်ချင်ကြတော့ဘူး..။ဇနီးမယား တွေ မိသားစုတွေ၊ ဆွေမျိုးတွေနဲ့ပဲ နေချင်ကြတယ်..။
ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတစ်ခုမှာတော့ ရောမစစ်သည်တွေ အသေအပျောက်များခဲ့တယ်.. စစ်သားသစ်တွေလိုလာတယ်..။စစ်သည်အင် အားကို လည်း ပိုမိုတောင့်တင်းခိုင်မာအောင် လုပ်ချင်တယ်.။ ဒါပေမယ့် ယောကျာ်းတွေကလဲ စစ်ထဲကိုမဝင်လိုကြတော့ အခက်တွေ့နေတယ်..။
Claudius ဟာစဉ်းစားတယ် ယောကျာ်းတွေဟာ မိသားစုသံယောဇဉ်ကြောင့် စစ်ထဲမဝင်ချင်ကြတာပဲ သူတို့သာ အိမ်ထောင်မပြုကြရင် စစ်ထဲဝင်ကြမှာပဲလို့ မိုက်မိုက်မဲမဲတွေးမိတယ်..။ ဒါကြောင့်ပဲ နိုင်ငံတစ်ဝန်း လူငယ်တွေ အိမ်ထောင်မပြုရလို့အမိန့်ထုတ်လိုက်တယ်..။ လူငယ်တွေ အတွက် ရက်စက်ပြီး အဓိပ္ပါယ်မရှိတဲ့ ဥပဒေပေါ့…။
ထိုဥပဒေကို ဆန့်ကျင့်တဲ့ ခရစ်ယာန် ဘုန်တော်ကြီး တစ်ပါးပေါ်လာတယ်..။ သူ့နာမည်က
Saint Valentine လိုခေါ်ပြီး လက်ထပ်ပွဲတွေမှာကောင်းချီးပေးတဲ့ ဘုးန်ကြီးပေါ့..။
သူဟာတင်းကြပ်တဲ့ ဥပဒေ တွေတားမြစ်ထားတဲ့ကြားမှ လက်ထက်ပွဲတွေကို သိုးသိုးသိပ်သိပ် စီစဉ်ကျင်းပပေးခဲ့တယ်..။ သူ့ရဲ့ သီးသန့် အခန်းကျဉ်းလေးထဲမှာ ဖယောင်းတိုင်လေးထွန်းပြီး မင်္ဂလာပွဲကို သူရယ် မင်္ဂလာမောင်နှံရယ် သုံးယောက်သား လျှို့ဝှက် ကျင်းပကြတယ်..။ တစ်ညမှာတော့ သတင်းပေါက်ကြားပြီး မင်္ဂလာ ကျင်းပတဲ့အခန်းထဲ ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးကြတယ်..။ မင်္ဂလာမောင်နှံ လွတ်မြောက်သွားသော်လည်း St. Valentine ဖမ်းဆီးခြင်းခံရပြီး သေဒဏ်ချမှတ် လိုက်ကြတယ်..။
သူဝမ်းမြှောက်သွားတာ တစ်ခုရှိတယ် သူထောင်ထဲမှာရှိစဉ် ရောမမှာ ရှိတဲ့ လူငယ်တွေဟာ ထောင်ထဲကို လာတွေ့ကြတယ် ပြတင်းပေါက်မှာ ပန်းတွေ ကြဲကြ မှတ်စုလေးတွေရေးကြ တယ်..။ ပြီးတော့ သူလုပ်ခဲ့တာမှန်ကန်ကြောင်း၊ သူတို့လေးတွေလည်းအချစ်ကို ယုံကြကြောင်း အားပေးထောက်ခံကြတယ်..။ အဲ့ဒီ့ထဲမှာ ထောင်မှုးကြီးသမီးလဲပါတာပေါ့..။ ထောင်မှုးကြီး က ခွင့်ပြုတာကြောင့် သူ့ရဲ့ အခန်းထဲမှာ လာတွေ့တယ် စကားတွေ အများကြီးပြောတယ်.။ အားပေးစကားတွေပြောတယ်.. နောက် သူသေခါနီးမှာ သူမရဲ့ ခင်မင်မှု၊ သစ္စာရှိမှု၊ အားပေးမှု တွေကို ကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့ “Love from your Valentine.” ဆိုတဲ့ မှတ်စုတိုလေး တစ်စောင် ထိုအမျုိးသမီးတွက်ရေးထားခဲ့တယ်..။
အေဒီ (၂၆၉) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်နေ့မှာ သူကွယ်လွန်သွားခဲ့တယ်.. အဲ့ဒီနောက်မှာ တော့ St. Valentine ကို လေးစားဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့်
“” . . Valentine’s Day . . “” ဆိုတာ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်..။
American အဖွဲ့တစ်ခုရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ တစ်နှစ်ကို သန်းတစ်ထောင်သော Valentines တွေပို့ကြတယ်..။ Christmas လက်ဆောင်ပြီးရင်တော့ ဒုတိယအများဆုံးပေါ့..။ အဲဒီ့ထဲမှာ အမျုိးသမီးတွေက ဝယ်ကြတာ ၈၄ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပါတဲ့…။
‘ ‘ .. ချစ်တတ်သူတိုင်း ပျော်ရွှင်ကြပါစေ .. ‘ ‘
ဖေဖော်ဝါရီ … အဖြူရောင်နှင်းတွေ အဆုပ်လိုက်၊ အဆုပ်လိုက် ကြဲဖြန့် … ဟေမန်က နွေကိုကြိုဖို့ နှင်းစက်တွေကို အားရပါးရ အရင်းပြုနေချိန် …
အမှတ်တရတွေဖြစ်ဖို့ အမှတ်တမဲ့က အစပြုလာခဲ့သလား …?
“အချစ်”ကို လလေးတွေနဲ့ ပုံသဏ္ဍန်တွေ အမျိုးမျိုးနဲ့ ခိုင်းနှိုင်းပြောတတ်ကြပါတယ် … တချို့က အချစ်ဆိုတာကို ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ဖူးပြီး ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်တွေ ထုတ်ခဲ့ကြသလို သူများခံစားချက်တွေကို နားလည်နိုင်သူတွေလည်း ရှိခဲ့ဖူးကြရဲ့ … ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲ မကြုံဖူးလို့ နားမလည်နိုင်ဘူး ဆိုတဲ့သူတွေတောင် ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ အချစ်အကြောင်းကို တွေးကြည့်ဖူးကြမှာပဲ … အချင်းချင်း အတွေ့အကြုံတွေ ဖလှယ်ဖူးကြမယ် … လမ်းညွှန်ပေးကြဖူးမယ် … နှစ်သိမ့်ပေးကြဖူးပါလိမ့်မယ် …
ကဲ … ဒီလို … လူသားတိုင်း စိတ်ဝင်စားကြတဲ့ အချစ်နဲ့ ပတ်သတ်ဆက်နွယ်နေသူတစ်ယောက် (ဒါမှမဟုတ်) အများအပြား ရှိနေကြပါလိမ့်မယ် … ဒါပေမယ့် ခုအချိန်ထိ အားလုံးသိထားသူတစ်ယောက် … သူကတော့ “ချစ်သူများနေ့”ဆိုတဲ့ နေ့ကလေးကို ဖန်တီးထူထောင်ခဲ့တဲ့ သူလဲဖြစ်ပါတယ် …
လူတိုင်း စိတ်ဝင်စားပါတယ်ဆိုတဲ့ သူ့အကြောင်းကို နှစ်၊ လတွေ ပြောင်းလဲလာတာနဲ့အမျှ တင်စားပြောဆိုတဲ့ ဒဏ္ဍာရီတွေပါ ပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ် … စကားလုံး ရွေ့လျားမှုတွေနောက်မှာ သူ့သမိုင်းဟာလဲ ပွားများလာခဲ့ပါရဲ့ … ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ချစ်သူတွေ၊ ချစ်ခဲ့သူတွေ၊ အချစ်ခံခဲ့ရသူတွေ အားလုံးအားလုံးကတော့ သူ့ကို လေးစားကြတယ် … သူ့ကို နားလည်ကြတယ် … သူ့ကိုချစ်ခင်ကြတယ် … သူ့အကြောင်းတွေ သိချင်ကြပါတယ် …
ပါးစပ်ရာဇ၀င်တွေ အမျိုးမျိုးနဲ့ နားလည်ရခက်တဲ့ Valentine’s Dayအကြောင်း ပြန်ပြောင်းပြောပြရမယ်ဆိုရင် သူတော်စင် အကြီးအကဲ စိန့်ဗယ်လင်တိုင်း (St. Valentine)ရဲ့ ရောထွေးတိမ်မြုပ်နေတဲ့ သမိုင်းကို ပဟေဠိတွေ ကြားထဲကနေ အစပြန်ဖော်ပေးဖို့ လိုပါလိမ့်မယ် … ယေဘုယျအားဖြင့်တော့ ဖေဖော်ဝါရီလဆိုတာ အချစ်ရည်၊ အချစ်သွေးတို့ လွှမ်းခြုံနေပြီး ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ ပြယုဂ်ကာလလို့ သိထားလေ့ ရှိကြပါတယ် … ဒီနေ့ခေတ်မှာ လူတွေနားလည်ထားတဲ့ St. Valentine’s Day နေ့ထူးနေ့မြတ်ကြီးဟာ ရှေးခေတ် ရောမရိုးရာနဲ့ ခရစ်ယာန် ဘာသာအတွက် အလေးအမြတ် ပြုရတဲ့ အထိမ်းအမှတ် နေ့တစ်နေ့လည်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် … ဒီတော့ စဉ်းစားစရာ အကြောင်းတစ်ခု ပေါ်လာပြန်ပါရော … အဲဒါကတော့ Valentine’s Dayနဲ့ ဘာသာရေးသမိုင်းကြောင်း ဘယ်လိုများ ဆက်စပ်နေပါသလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းပါပဲ …။
ဒီနေ့ခေတ်မှာ ကတ်သိုလစ် ဘုရားကျောင်းတွေက သိနားလည်ထားကြတာကတော့ Valentineလို့ အမည်တွင်ခဲ့တဲ့ သူတော်စင် (၃)ပါး ရှိခဲ့ပါတယ်တဲ့။ ဒဏ္ဍာရီတစ်ခုက အတည်ပြုထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းအရ Valentineဆိုတာ (၃)ရာစုလောက်က ရောမမှာ ပေါ်ထွန်းခဲ့တဲ့ ဘုန်းတော်ကြီး တစ်ပါးဖြစ်ပြီး အဲဒီဘုန်းတော်ကြီးဟာ ကလောဒီးယပ်စ်(၂) ဘုရင်လက်ထက်မှာ သက်ရှိထင်ရှား ရှိခဲ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးလို့ ဆိုပါတယ်။ ဘုရင်ကလောဒီးယတ်စ်ဟာ တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ အိမ်ထောင်သည်တွေကို စစ်တပ်အတွက် မရွေးချယ်ဘဲ လူပျိုလူလွတ်တွေကို စစ်မှုထမ်းဖို့ အမိန့်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ တိုင်းပြည်က လူပျိုတွေခမျာ သူတို့ရဲ့ ချစ်သူကြင်သူတွေနဲ့ ဝေးကွာရတဲ့ စိတ်ဒုက္ခကို ခံစားနေခဲ့ရရှာတယ်။ ဘုရင်ကလဲ လူပျိုတွေ အိမ်ထောင်မပြုရဘူးလို့ အမိန့်ထုတ်ထားတာကိုး။ လူငယ်တွေရဲ့ သနားစရာအဖြစ်ကို မြင်တွေ့ရတဲ့ သူတော်စင် Valentineဟာ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခု ခိုင်ခိုင်မာမာချပြီး ဥပဒေ အပြင်ဘက်ကနေ စစ်မှုထမ်းသူ လူငယ်လေးတွေကို သူတို့ရဲ့ ချစ်သူတွေနဲ့ တိတ်တဆိတ် လက်ထပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဘုန်းတော်ကြီးရဲ့ လုပ်ရပ်ကို သိသွားတဲ့အခါ ဘုရင်ကလောဒီးယတ်စ်တစ်ယောက် ဒေါသပေါက်ကွဲပြီး ရှင်တော်Valentineကို သေဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ပါတော့တယ်။
နောက်ထပ် ရာဇ၀င်တစ်ခုကတော့ သူတော်စင် Valentineဟာ အကျဉ်းခံရသူတွေထဲမှာ အပါအ၀င် ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ နောက်တော့ အကျဉ်းသား Valentineဟာ သူ့ဆီကို မကြာခဏ အလည်လာတွေ့တဲ့ ထောင်မှူးသမီးနဲ့ ချစ်ကြိုးသွယ်မိခဲ့တယ်။ ထောင်ထဲမှာ သူမသေဆုံးခင် စာတစ်စောင်ကို ချစ်သူအတွက် ချန်ထားခဲ့ရာမှာ “From Your Valentine”ဆိုပြီး လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါသတဲ့။ ဒီနေရာမှာ သူရေးခဲ့တဲ့ စာအရေးအသားဟာ ခုခေတ်ရင်ဖွင့်စာတွေမှာ တွေ့နေရတဲ့ အသုံးအနှုန်းနဲ့ သွားပြီးတူညီနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒီတော့ ပထမဆုံးသော ချစ်သက်လက်ဆောင်ကို Valentineက ပေးပို့ခဲ့တယ်လို့ သတ်မှတ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အလယ်ခေတ်လောက်က Valentine ဒဏ္ဍာရီဟာ ပြင်သစ်နဲ့ အင်္ဂလန်နိုင်ငံတွေမှာ တော်တော်လေး ခေတ်စားလာခဲ့ပြီး အယူအဆအမျိုးမျိုးလဲ ဆင့်ပွားပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။ တချို့ကတော့ St. Valentineဟာ ခေါင်းဖြတ်ပြီး အသတ်ခံရတယ်လို့ ယုံကြည်နေကြပြီး နောက်ထပ်လူပြောများတာတစ်ခုက Valentineရဲ့ ရုပ်ကြွင်း (ဒါမှမဟုတ်) အရိုးပြာကို အိုင်ယာလန်နိုင်ငံက ဘုန်းတော်ကြီး John Sprattအတွက် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး George XVIက လက်ဆောင်အဖြစ် ပေးအပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာပါပဲ။ အိုင်ယာလန် ဘုန်းတော်ကြီးဟာ တရားဟော အရမ်းကောင်းတဲ့အတွက် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးက အထင်ကြီး လေးစားမိပါသတဲ့။ ဒါကြောင့်လဲ ရွှေကွပ်ထားတဲ့ အနက်ရောင် ကြုတ်ကလေးထဲမှာ ထည့်ထားတဲ့ သူတော်စင် Valentineရဲ့ အရိုးပြာကို ပေးအပ်လိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အိုင်ယာလန်နိုင်ငံ၊ ဒဗ္ဗလင်မြို့၊ Whitefriarလမ်းက ဘုရားကျောင်းမှာ ပြသထားတဲ့ အဲဒီကြုတ်ကလေးကို Valentine’s Dayရောက်လာတိုင်း လူတွေက သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့ ရှိကြပါတယ်တဲ့။
အေဒီ (၂၇၀)လောက်တုန်းက Valentine Dayကို ဖေဖော်ဝါရီလအလယ်မှာ လူအများစု ယုံကြည်မှုအရ ကျင်းပခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက Valentine Day စားပွဲသောက်ပွဲတွေကို ဘုရားကျောင်းတွေမှာ ကျင်းပခဲ့တယ်လို့ ယုံကြည်ရပါတယ်။ Valentine Dayကို ကျင်းပရင်းနဲ့ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တို့ရဲ့ Pagan Lupercaliaပွဲတော်ကို ဆက်နွယ်ကျင်းပဖို့ အခွင့်အခါ ကြုံသွားတော့ Valentine Dayအပေါ် လူတွေရဲ့ အာရုံစိုက်မှုဟာ ပိုပြီးကြီးမားလာပါတော့တယ်။ ရောမခေတ်တုန်းကတော့ ဖေဖော်ဝါရီလလယ် နွေဦးပေါက်ရာသီကို သန့်စင်ဆေးကြောချိန်လို့ သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ အိမ်တွေမှာ ဘာသာရေးအရ ဆေးကြောသန့်စင်မှုတွေ ပြုလုပ်ကြပါတယ်။ ဆားတွေ၊ Speltလို့ခေါ်တဲ့ ဂျုံတွေနဲ့ ကြဲဖြန့်ထားလေ့ ရှိကြပါတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာ ရောမခေတ် အစဉ်အလာအရ စိုက်ပျိုးခြင်းကို ပိုင်စိုးတဲ့ နတ်ဘုရား Faunusကို ပူဇော်ပသတဲ့ အစဉ်အလာရှိခဲ့ပြီး ရောမနိုင်ငံတော်ကို ထူထောင်ခဲ့တဲ့ Romulusနဲ့ Remusတို့ကို ပူဇော်တဲ့ပွဲတော် ကျင်းပတဲ့ ကာလလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီပွဲတော်ကို ကျင်းပဖို့အတွက် Lupercaliaဂိုဏ်းဝင်တွေနဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးတွေဟာ သူတို့ငယ်ဘ၀က ခိုအောင်းနေခဲ့တဲ့ ဂူတွေထဲမှာ စုဝေးကြပါတယ်။ ပြီးတဲ့အခါ ဆိတ်ကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ယဇ်ပူဇော်ပြီး ခွေးကိုတော့ သန့်စင်မှု အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ယဇ်ပူဇော်ပါသတဲ့။ ငယ်ရွယ်တဲ့ ယောက်ျားပျိုတွေဟာ ဆိတ်သားရေကို ခွာချွတ်ပြီး ယဇ်ပူဇော်မယ့် သွေးထဲမှာစိမ်ပြီး လမ်းတွေပေါ်မှာ ပက်ဖြန်းကြပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေကလဲ သွေးသံရဲရဲ မြင်ကွင်းကို ကြောက်လန့်တာမျိုး မရှိဘဲနဲ့ သူတို့ကိုယ်မှာ ဆိတ်သွေးတွေကို စိုစွတ်စေပါတယ်။ အဲဒီခေတ် ဓလေ့ထုံးစံအရ မိန်းကလေးတွေဟာ ဆိတ်သားရေနဲ့ သူတို့ခန္ဓာကိုယ် ထိတွေ့ခြင်းဟာ နှစ်သစ်မှာ ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေ ရရှိခံစားစေနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်တဲ့။ သမိုင်းမှတ်တမ်းတွေအရ အဲဒီပွဲတော်ချိန်တွေမှာ ရောမမိန်းမပျိုလေးတွေဟာ သူတို့နာမည်တွေကို ကရားအိုးလေးတစ်လုံးထဲ ထည့်ထားကြပြီး လူငယ်ကာလသားတွေကတော့ အဲဒီကရားလေးထဲက မိန်းကလေးတွေရဲ့ နာမည်ကို မဲနှိုက်ကြပါတယ်။ မဲမှာပါတဲ့ နာမည်ရှင် မိန်းကလေးနဲ့ မဲပေါက်တဲ့လူငယ်လေးဟာ ချစ်သူစုံတွဲတွေအဖြစ် လူတွေက သတ်မှတ်ပေးကြပြီး နောက်ပိုင်းမှာ လက်ထပ်ပေါင်းသင်းကြတဲ့အထိ အရေးပါစေခဲ့ပါတော့တယ်။
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး Gelasiusက အေဒီ(၄၉၈)ခုနှစ် အရောက်မှာ Valentine Dayကို ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၄)ရက်နေ့အဖြစ် သတ်မှတ်တဲ့အကြောင်း တရားဝင် ကြေငြာလိုက်ပါတော့တယ်။ ရောမခေတ် စုံတွဲရှာတဲ့ဓလေ့ဟာလည်း စနစ်သစ်တစ်ခုအနေနဲ့ ပြဋ္ဌာန်းခံခဲ့ရပါတယ်။ ဒီစနစ်အရ ခရစ်ယန် မဟုတ်တဲ့သူတွေရော၊ ဥရောပဒေသက မဟုတ်တဲ့သူတွေပါ ဒီပွဲလေးကို ဆင်နွှဲခွင့် ရလာပါတော့တယ်။ တနည်းပြောရရင်တော့ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု ပွဲတော်လေးကနေ လူတိုင်းပါဝင်နိုင်တဲ့ အထိမ်းအမှတ် ပွဲတော်လေးအဖြစ် ကူးပြောင်းလာတဲ့ သဘောပါပဲ။ အလယ်ခေတ် ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ အင်္ဂလန်နဲ့ ပြင်သစ်နိုင်ငံတွေမှာ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၄)ရက်နေ့ကို “ကျေးငှက်တို့ အဖော်ရှာသော ရာသီအစ”လို့ ယုံကြည် သတ်မှတ်လာကြပါတယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်းတော့ ဖေဖော်ဝါရီ (၁၄)ရက်နေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ Valentine Dayဟာ ချစ်ခြင်းဖွဲ့ သင်္ကေတတစ်ခုအဖြစ် တစ်ကမ္ဘာလုံး လက်ခံယုံကြည်ပြီး အမှတ်တရ ကျင်းပခဲ့ကြတာ ဒီနေ့အချိန်ထိပါပဲ။
ပထမဆုံး Valentine’s Dayအထိမ်းအမှတ် ကဗျာ …
အစောဆုံး Valentineကဗျာကို ပေးပို့ခဲ့သူကတော့ အော်ရီလန်နယ်စား ချားလ်စ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လန်ဒန်မျှော်စင်ကြီးမှာ အကျဉ်းကျနေတုန်းက သူ့ချစ်ဇနီးကို ရေးသားပေးပို့ခဲ့တာပါ။ သူဟာ ပြင်သစ်မင်းဆွေမင်းမျိုး တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး Agincourtစစ်ပွဲမှာ အင်္ဂလိပ်တွေရဲ့ ဖမ်းဆီးမှုကို ခံရပြီး လန်ဒန်မျှော်စင်ကြီးမှာ အထီးကျန်စွာ အကျဉ်းချ ခံထားရတာပါ။ (၁၄၁၅)ခုနှစ်က ရေးခဲ့တဲ့ သူ့ကဗျာနဲ့ မူရင်းလက်ရေးမူကို ဗြိတိန်နိုင်ငံ၊ လန်ဒန်မြို့မှာရှိတဲ့ ဗြိတိသျှအမျိုးသား စာကြည့်တိုက်မှာ မှတ်တမ်းတင် သိမ်းဆည်းထားပြီး နှောင်းခေတ်လူတွေကို ပြသထားပါတယ်။ နောက်ပြီး မှတ်တမ်းတွေအရ Henry Vဘုရင်မင်းမြတ်ဟာ စာဆိုတော်တစ်ဦးကို ဆင့်ခေါ်ပြီး သူ့ချစ်သူ ဗေးလက်စ်မင်းသမီး Catherineဆီ Valentineအထိမ်းအမှတ် ချစ်သ၀ဏ်လွှာတစ်စောင် ရေးသားပေးပို့ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ချန်ထားလို့မရတဲ့ မြှားနတ်မောင် …
Valentine’s Dayရဲ့ အထိမ်းအမှတ် သင်္ကေတတွေထဲမှာ ထင်ရှားတဲ့ Iconတစ်ခုကတော့ Cupidလို့ခေါ်တဲ့ ဖူးစာရေး မြှားနတ်မောင်လေးပါပဲ။ ကလေးငယ်လေးတစ်ယောက်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ တောင်ပံလေးတွေပါတဲ့ နတ်ကလေးပါ။ အချစ်နတ်သမီး Venusရဲ့သားတော်လို့ လူတွေက သတ်မှတ်ထားကြပြီး ရှေးဟောင်းဂရိ ကျမ်းစာတွေထဲမှာတော့ အလှနတ်ဘုရားမ Aphroditeရဲ့ သားတော် Erosကို မြှားနတ်မောင်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားကြောင်း ဖော်ပြထားပြန်ပါတယ်။
Cardလေးတွေ ပေးကြပြီ …
ဗြိတိန်မှာ (၁၇)ရာစုကစပြီး Valentine’s Dayကို ကြီးကြီးကျယ်ကျင် ဆင်ယင်နွှဲပျော်ခဲ့ကြပါတယ်။ (၁၈)ရာစု အလယ်လောက်မှာတော့ ချစ်သူစုံတွေတွေသာမက ပွဲလမ်းသဘင် ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ လူတိုင်းအတွက် အကျုံးဝင်တဲ့ ပွဲတော်နေ့လေး ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ချစ်သူခင်သူ အချင်းချင်း အမှတ်တရ လက်ဆောင်လေးတွေ၊ ကတ်လေးတွေ အပြန်အလှန် ပေးပို့လာကြပါတယ်။ Valentineခေတ်ဦးက လက်ရေးမူနဲ့ ရေးသားပေးပို့တဲ့ သ၀ဏ်လွှာတွေကို အသုံးများခဲ့ပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာတော့ ပုံနှိပ်ထားတဲ့ ပို့စ်ကတ်လေးတွေ ပိုပြီး ခေတ်စားလာပါတယ်။ အဲဒီကတ်လေးတွေမှာ အချစ်ကို သရုပ်ဖော်တဲ့ စာသားလေးတွေ၊ ရုပ်ပုံလေးတွေ ပါလာခဲ့ပြီး အချစ်ရေးမှာ သတ္တိကြောင်တတ်တဲ့ လူငယ်လေးတွေအတွက် ချစ်သူကို ရင်ဖွင့်ဖို့ အားကိုးအားထားရာ နည်းလမ်းလဲ ဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ စာပို့ခ သက်သက်သာသာနဲ့ Valentine’s Dayပို့စ်ကတ်လေးတွေ ပို့ပေးတဲ့ ၀န်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းလေးတွေ ပေါ်လာပြီးတော့ ချစ်သူတွေကြားမှာ ထိရောက်တဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုလေးတွေ ရှိခဲ့တယ်လို့လဲ သိရပါတယ်။
အမေရိကန်မှာတော့ လက်လုပ် Valentine’s Dayလက်ဆောင်လေးတွေ အပြန်အလှန်ပေးကြတဲ့ ဓလေ့တစ်ခု (၁၇၀၀)ပြည့်နှစ် အစောပိုင်းကာလမှာ ခေတ်စားလာခဲ့ပါတယ်။ သမိုင်းမှတ်တမ်းတွေအရတော့ ပထမဆုံး Valentine’s Dayလက်ဆောင်ကို စပြီးတီထွင်တဲ့သူဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံသား Esther A. Howlandဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါသတဲ့။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ကတ်တွေပို့တာ၊ လက်ဆောင်လေးတွေလဲတာဟာ ချစ်သူများနေ့ရဲ့ မပြောင်းလဲနိုင်တော့တဲ့ အထိမ်းအမှတ်တွေ ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ Greeting Card Associationရဲ့ ခန့်မှန်းချက်အရ Valentine’s Dayအတွက် အထိမ်းအမှတ် ပို့စ်ကတ်လေးတွေ ပေးပို့ကြတာဟာ နှစ်စဉ် ကတ်အရေအတွက် သန်း(၁၀၀၀)ကျော်ထိ ရှိတတ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ ဒါဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ခရစ္စမတ်ကတ်လေးတွေပြီးရင် အများဆုံးပါပဲ။ စိတ်ဝင်စားစရာ တစ်ခုကတော့ Valentine’s Day လက်ဆောင်လေးတွေအတွက် ငွေပေးချေသူဦးရေရဲ့ (၈၅)ရာခိုင်နှုန်းဟာ အမျိုးသမီးတွေ ဖြစ်နေတယ် ဆိုတာပါပဲ။
တဖြည်းဖြည်း ကျယ်ပြန့်လာကြတာ …
အမေရိကန်မှာ Valentine’s Dayကို စည်စည်ကားကား ကျင်းပကြသလို ကနေဒါ၊ မက္ကစီကို၊ ဗြိတိန်၊ ပြင်သစ်၊ သြစတြေးလျနိုင်ငံတွေမှာလည်း ပျော်ရွှင်စွာ ဆင်နွှဲကြပါတယ်။ နောက်တော့ ဂျပန်၊ တရုတ်၊ ကိုရီးယား၊ အိန္ဒိယနဲ့ အာရှနိုင်ငံတွေထိ ကူးစက်ပြန့်နှံ့လာပြီး ခုဆိုရင် Valentine’s Dayဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ ချစ်သူစုံတွဲလေးတွေအတွက် ရင်ခုန်ဆွတ်ပျံ့စေမယ့် အထိမ်းအမှတ်နေ့ကလေးအဖြစ် ခိုင်ခိုင်မာမာ ရပ်တည်နေပါပြီ။ ရှင်တော် Valentineဆီကတဆင့် သန္ဓေတည် မွေးဖွားလာတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာပြယုဂ် နေ့ထူးနေ့မြတ်ကလေးဟာ လူသားတွေရင်ထဲမှာ အချစ်ရှိနေသ၍ ဘယ်တော့မှ မပျောက်ပျက်နိုင်တော့မယ့် ရက်စွဲလေးအဖြစ် ထာဝရတည်ရှိနေဦးမှာ အသေအချာပါပဲ။
ရင်ခုန်စွတ်ပျံ့မှုတွေနဲ့ သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့ လှတယ်…
အချစ်ဆိုတာ လူတစ်ယောက်ကို အကောင်းတွေပဲပေးချင်တယ်ဆိုတဲ့ မေတ္တာမနောကံ ပေးစွမ်းနိုင်သူဖြစ်တယ်….
ဒီစာစုလေး များသည် မနှစ် ချစ်သူများနေ့ က ဖတ်မိသော စာသားလေးများ ကို word ဖိုင်ဖြင့် ကော်ပီကူး၍ သိမ်းယူထားခြင်း ဖြစ်သောကြောင့် ဘယ်က ကူးယူထားသည်ကို မမှတ်မိတော့ ပါသဖြင့် ရေးသားသူ အမည်ကို မဖော်ပြနိုင်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
Posted by ဇော်သိင်္ခ at 7:03 PM